41 - 60 of 72,121 Comments
Next Last judge
chockey wrote: ndibatyiwe ndibawela indoda engoyikiyo ukutya ibhentse. Ibhentse yam ihleli imanzi ngoba ndidlala ngekhozo lam. Izaninemithondo yenu madoda angoyikiyo ukutya indutsu. Sikhona thina sweety
Ndibatyiwe umthondo uqinile gals zasebhayi plz Ndcela uzekiswa col me so we cn arrange 0789386847Ndinomthondo omkulu omaandi Darkish nabanye
Mpilo2 wrote: I galz zaseKapa azibatywana? Ndifuna umntu esizotyana ndiyivule ikuku ndifake ulwimi nde ibemanzi ndiyakwazi ukudlala ngomthondo usekukwini mpilo2 undawoni ekapa coz nam ndisekapa and ndibatywe ndifuna lomthondo wakho. Unganditya ubusuku bonke.
honwet wrote: <quoted text> mpilo2 undawoni ekapa coz nam ndisekapa and ndibatywe ndifuna lomthondo wakho. Unganditya ubusuku bonke. for more info mxt allstar4 or shiye no yakho ba awumind..ndibatywe ngk ngase undivulele lobentse yakho ndikuchamele
honwet wrote: <quoted text> mpilo2 undawoni ekapa coz nam ndisekapa and ndibatywe ndifuna lomthondo wakho. Unganditya ubusuku bonke. mxt lol allstar4 or shiye zakho detailz, ndibatywe ngk ngase undivulele lokuku yakho ndikuchamele
Mpilo2 wrote: <quoted text>for more info mxt allstar4 or shiye no yakho ba awumind..ndibatywe ngk ngase undivulele lobentse yakho ndikuchamele ithini i email address yakho?
honwet wrote: <quoted text> ithini i email address yakho? zimbini bt uzosebenzisa le allstar4@mxit.im
If akhona amalady apha ekthong ndikhona emtshatshosi
awekho na amadoda abawela i3sum apha e PE yidani nize nalemithondo yenu imnandi ibeyi2qha sisuseni imbatyo zethu, endutswini nasebhentseni ndiwilling ndishushu ebhedini. Ndibatyiwe qha. ndiyayikhwela indoda
Chockey call me 0789386847umkhulu ke lomthondo ndise PE
honwet wrote: mna ndifuna umntu ozoku ndimunca de ndichame anditye onele. Ndisekapa Sana ndilapha eKapa plz get in touch if usafunutyiwa uqinile owam umthondo ndizokumunca noba ungakanani yiza nalobhentse ndizokuniki Bang bang, u can leave yo email or I will give u eyam
ndifuna umntu onje ngawe. Shiya lo email address. Ungayitya oko, ndiwubawela nyani umthondo omnandi.
Candy wrote: Mna ndisoloko ndibatyiwe,ndithanda incanca enkulu indizeke ndide ndide ndichame,nangoku ndingxathile ndizifaka iminwe ekukwini nam ndenze lonto sana.
Ta X wrote: <quoted text>Sana ndilapha eKapa plz get in touch if usafunutyiwa uqinile owam umthondo ndizokumunca noba ungakanani yiza nalobhentse ndizokuniki Bang bang, u can leave yo email or I will give u eyam ndisafuna yho ngoku ndibatywe kangaka. Shiya email address yakho.
honwet wrote: <quoted text> ndisafuna yho ngoku ndibatywe kangaka. Shiya email address yakho. nantsi ke sana xolix@yaoo.com I'm waiting for yo email ke vha mayb singatyana now
xolix@yahoo.com the first one inemispelling sebenzisa lena vha
honwet wrote: <quoted text> ndisafuna yho ngoku ndibatywe kangaka. Shiya email address yakho. Sana nantsi email yam ziyeke ezizokuqala sorry abt that xolix89@yahoo.com email me now we can arrange ndibatyiwe
honwet wrote: <quoted text> ndisafuna yho ngoku ndibatywe kangaka. Shiya email address yakho. ndiyifakile ke iemail yam ndilinde kuwe ndiyazithanda nempundu udlala ngazo nokuzitya ndichithela emabeleni
Candy wrote: Mna ndisoloko ndibatyiwe,ndithanda incanca enkulu indizeke ndide ndide ndichame,nangoku ndingxathile ndizifaka iminwe ekukwini uphi wena baby?
honwet wrote: <quoted text> ndisafuna yho ngoku ndibatywe kangaka. Shiya email address yakho. haybo honey sowuncamile na? ndikulindile email me sibone ukuba sodibanaphi
big red lad
Nude Photos with location
Total comments across all topics: 257,755,721